Izicathulo zentshintshi zentambo 2015, ifoto. Iingcebiso kubapapa, zeziphi izicathulo eziya kuba sefesini entwasahlobo ka-2015, ifoto
Ieholide zikaJanuwari zisezantsi, oko kuthetha ukuba, iifowistas zithandekayo, ukuba lixesha lokucinga malunga naluphi uhlobo lweembadada eziza kubakho festile kule ntwasahlobo. Ukuhlaziywa kwefashoni esiyilungise kunye kunye nabalingisi besitolo se-intanethi seengubo kunye nezicathulo zaseLamoda.
Izibhotshana kunye neebhotile ezivela kuma-70 ukuya kuma-80
"Ephakamileyo" abafazi befestile bayazi ukuba i-Spring-Summer Summer season izakukholisa izicathulo zayo ezisebenzayo kunye nezifo ezinokuzikhethela kwisimbo se-70 nee-80. Phakathi kweentando zentwasahlobo kufuneka ziphawulwe zibhotshi eziphezulu, izibhothi-iisitokisi kwi-wedge efihlakeleyo kunye neenqindi-bhotile kwisitayela sezemidlalo.
Spring Spring Women's Shoes 2016
Izibhotshi ze Spring Spring 2016
Spring Spring Women's Shoes 2016, ifoto
Iintlanzi aziyi kuvelisa izikhundla zabo zetekisi kulo nyaka. Unokukhetha ngokukhuselekileyo imifanekiso yesikhumba kunye nesithende sendawo ephezulu, kunye neyodwa.
Ziziphi izihlangu ezifashiniweyo entwasahlobo ka-2016
Ziziphi izicathulo ezisefesini entwasahlobo ka-2016, ifoto
Ngokubhekisele kwi-boot-stocking, ukubetha kwangempela kuya kubakho imodeli ye-velor kwi-wedge efihliweyo.
Qaphela kwakhona ukuba i-classic-eosed-knees-knees stockings kwi-hairpin encinci isaphaya komncintiswano.
Iifoto zezicathulo ezisebenzayo ziya kuqonda iibhothi ezikhululekile ngendlela yezemidlalo.
Iimpawu ezikhangeleka kakhulu ezibonakalayo ezivela emzimbeni wesikhumba esikhanyayo.
Iinqwelo ezikhethiweyo kunye ne-slippers ezisebenzayo
Umfanekiso osentwasahlobo okhanyayo awukwazi ukucingelwa ngaphandle kwembini yezicathulo ezenziwe ngesitayela. Ngexesha elitsha kuya kuba yintandokazi kunye neenqanawa zesikhumba zeklasi, kunye neenqwelo ezithandekayo ze-velor sopers, kunye nezicathulo ezikhululekile ze-suede ezinezithende eziphezulu.
Ngendlela, ipalayini yombala iyasebenza kwimozulu yasentwasahlobo, apho i-shades eyimvelo ebumnyama ibangelwa khona: abamnyama, abamnyama, abomvu.
Bored? Emva koko iintsuku ezikhanyayo zelanga kwaye zicocele zikhethe iipiliti eziqhakazile zeelmon okanye i-red luferov, ngokuqinisekileyo iya kuba yintwasahlobo yonyaka ka-2015.
Amantombazana asebenzayo asemasemini ayengabonakali ubomi bawo ngaphandle kwama-sneakers kunye nabakhonkco, abaye baqhuba izikhundla eziphambili kwixesha elidlulileyo leentsuku. Kwaye le ntwasahlobo iphinde ikhuphisane. Ezi zihlangu zikhululekile kwaye zidibene kunye nantoni nayiphi na ingubo. Ngentwasahlobo ka-2015, khetha ama-sneakers amancinci kunye neenkontsho, unameva kunye neetyunithi, abaculi be-snickers kunye neenkonkco ezinobumba, iingubo kunye ne-velor, ama-sneakers aphezulu kunye ne-furel lapel. Musa ukulibala ngeemidlalo zokudlala zeklasi. Ukulula kobunzima babo bungaphezulu kokugqithiswa ngumbala ogqithisileyo okanye owenzela imfashini kulo mzuzu umbala omhlophe.
Imbali yefashoni kunye nesitayela kwisambatho
Imbali yekhredithi yamaKristu yaseDior
Isitayela se-Anime: eqaqambileyo, enomdla engavamile
Isitayela ukusuka kuL ukuya kwi-XXL: izinto eziphathekayo eziphathekayo eziphathekayo kubhinqa abahlambulukileyo
Iifowuni ezilishumi eziphezulu
Indlela yokwenza utywala olukhanyayo?
Impembelelo yomculo kwiintsana ezisanda kuzalwa
Hlala kubalimi bokuqala kumgca we-Septemba 1 abavela kwizifundo nabazali
Izityalo ezomileyo: iivinki, ama-apricot omisiwe
Imifuno, iziqhamo, amajikijolo kubantwana
Umsebenzi wezilanga kunye nempembelelo yayo kwimpilo yabantu
Iimbalwa ezimbalwa malunga nokuhluthwa kwegazi